0 Tuesday May 12, 2020 - 13:33:13
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Turkiga ayaa digniin kulul loogu jeediyay maleeshiyaadka dagaal ooge Khaliifa Xaftar ee ka dagaallamaya wadanka Liibiya.
Silva Romano oo beenisay in islaamnimada lagu qasbay.
0 Tuesday May 12, 2020 - 12:12:02
Silva Romano oo ah haweenay Talyaani ah oo dhawaan lagasii daayay xabsi kuyaal gudaha dalka Soomaaliya ayaa bixisay caddeymo dheeraad ah oo ku saabsan xaaladeeda.
Carona Virus oo si xowlli ah ugu faafaya dalka Ruushka iyo 80,000 oo Mareykanka ku dhimatay.
0 Monday May 11, 2020 - 21:24:58
Wararka ka imaanaya wadanka Ruushka ayaa sheegaya in markii ugu horraysay si aan horay loo arag uu cudurka Carona ugu dhax faafayo bulshada wadankaasi ku dhaqan.
0 Monday May 11, 2020 - 11:38:22
Faransiiska oo qaadaya xaaladdii bandawga aheyd ee uu dadkiisa saaray.
0 Sunday May 10, 2020 - 16:46:47
Dowladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in ay si rasmi ah uqaadayso xaaladihii bandawga ahaa ee wadankaas lasaaray bishii maarso ee lasoo dhaafay kadib markii uu dilaacay cudurka safmarka ee Carona Virus.
0 Saturday May 09, 2020 - 11:46:40
Khasaara lixaad leh ayaa gaaray dhaqaalaha dalka Mareykanka sababa laxiriira cudurka safmareenka ah ee Carona Virus.
0 Thursday May 07, 2020 - 10:28:11
Hoos udhacii ugu ballaarnaa ayaa ku yimid dhaqaalaha dalka Mareykanka tan iyo sanadii 2008 xilligaas oo fuuq bax dhaqaale ku habsaday wadamada reergalbeedka.
0 Tuesday May 05, 2020 - 14:00:05
0 Tuesday May 05, 2020 - 11:29:01
Inta badan dowladaha reergalbeedka ayaa ku dhawaaqay in qeyb ahaan ay qaadayaan xaaladdii bandawga aheyd ee ay geliyeen muwaadiniintooda kadib markii uu dilaacay cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.
0 Monday May 04, 2020 - 14:35:25
Dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa markale hawada isku mariyay eedaymo ku aaddan cidda mas'uulka ka ah caabuq Covid19 ee halaagga ugu daran ugeysanaya dadka ku dhaqan wadamada reergalbeedka.
0 Monday May 04, 2020 - 12:03:45
Xarakada Jihaadiga ah ee Taliban ayaa qaadday weeraro hor leh oo ay ku beegsanayso saldhigyada ciidamada xukuumadda Afghanistan arrinkaas wiiqaya ciidanka taakta daran ee dowladaha reergalbeedka ay dhiseen.
Ciidamada Alsiisi oo dad Shacab ah ku xasuuqay gobolka Saynaa ee dalka Masar.
0 Sunday May 03, 2020 - 16:25:27
Wararka ka imaanaya wadanka Masar ayaa sheegaya in ciidamada Melleteriga wadankaas ay dileen dad shacab ah oo si sharci darra ah ugu xirnaa xabsiyo qarsoodi ah.
0 Saturday May 02, 2020 - 13:41:04
Caabuqa Covid19 ayaa wali gummaad daran ka geysanaya gudaha wadanka Mareykanka, dhimashada ayaa ah mid sare usii kacaysa maalinba maalinta ka dambaysa.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo goob fagaare ah lagu arkay.
0 Saturday May 02, 2020 - 08:03:56
Markii ugu horraysay 20 maalmood kadib waxaa fagaare kasoo muuqday hoggaamiyaha dowladda Shuuciydda Kuuriyada waqooyi kaasi oo lahadal hayay in uu dhintay ama uu xanuunsanayo.
0 Thursday April 30, 2020 - 09:37:10
Shalay dadka Americanka ah waxay u aheyd maalin kale oo madoow kadib markii ay dhinteen dad ka badan 2,500 oo qof waana maalintii Afaraad oo si xariir ah ay dhimashadu si xowlli ah ku socoto.
0 Wednesday April 29, 2020 - 16:55:43
Qarax dad Shacab ah ay ku dhinteen oo ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya.
0 Wednesday April 29, 2020 - 11:52:26
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay qarax aad uxooggan oo shalay ka dhacay magaalo kutaal waqooyiga wadanka Suuriya.
Khaliifa Xaftar oo isku magacaabay madaxweynaha dalka Liibiya.
0 Tuesday April 28, 2020 - 12:31:26
Dagaal ooge Khaliifa Xaftar ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu yahay hoggaamiyaha rasmiga ah ee maamula wadanka Liibiya.
Melleteriga Turkiga oo qof shacab ah ku dilay waqooyiga Suuriya.
0 Monday April 27, 2020 - 08:27:35
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof oo rayid ah uu dhintay sedax kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii ay ciidamada melleteriga Turkiga toogasho ugeysteen dad dibad baxyo ka dhigayay meel ku dhow degmada Alneyrab ee dhacda bariga gobolka Idlib.
0 Sunday April 26, 2020 - 19:29:12
Caabuqa halista ah ee Covid19 ayaa wali gummaad ka geysanaya daafaha caalamka haba ugusii badnaadaanee wadamada reergalbeedka sida Mareykanka iyo qaaradda Yurub.
0 Thursday April 23, 2020 - 15:31:57
Dadka uu soo ritay caabuqa Carona Virus ayaa ku dhow 2 malyuun oo ruux caalami ahaan halka dhimashadu ay ka badan tahay 175 kun oo qof sida lagu sheegay tirakoob caafimaad ee shalay soo baxay.
Madaxweynaha Tajakistan oo muslimiinta wadankiisa ugu baaqay in ay dib udhigaan Soonka bisha Ramadaan!
0 Thursday April 23, 2020 - 14:52:32
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Tajikistan ayaa loogu baaqay muslimiinta wadankaas kunool in aysan soomin bisha Ramadaan ee socota oo ah bil fadli badan oo in lasoomo ay waajib ku tahay qof walba oo muslim caafimaad qaba islamarkaana aan wax cudur daar ah laheyn.
0 Thursday April 23, 2020 - 14:30:49
Warbixin: Dowladda Jaad oo gaajaysiin iyo tacdiibin ku dhishay 44 Maxabuus.
0 Wednesday April 22, 2020 - 09:02:15
Xukuumadda dabadhilifka Jaad ayaa faah faahin dheeri ah ka bixisay sababta ay udhinteen tobanaan maxaabiis muslimiin ah oo ku xirnaa xabsi kuyaal magaalada Anjimeena caasimadda u ah wadankaasi.
0 Monday April 20, 2020 - 19:23:12
isbedello dhanka maamulka ah ayaa lagasoo calaamadeeyay qeybo katirsan wadanka liibiya ee dhaca waqoyiga qaaradda afrika.
0 Monday April 20, 2020 - 12:53:40
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya toogasho dad badan ku dhinteen oo xalay ka dhacday wadanka Canada ee dhaca waqooyiga qaaradda America.
Xoogaga Taliban oo weerar askar badan lagu laayay ka fuliyay Waqooyiga Afghanistan.
0 Monday April 20, 2020 - 12:03:05
Jihaadiyiinta Taliban ayaa markale wadanka Afghanistan ka fuliyay weerar dhiig badan ku daatay oo lagu laayay askar iyo saraakiil katirsanaa xukuumadda Kaabuul.
Sacuudiga oo xukun dil ah ku fuliyay Wiil dhalinyara ah oo dhaawacay dad reergalbeed ah.
0 Sunday April 19, 2020 - 12:26:40
Maamulayaasha wadanka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay in ay xukun dil ah ku fuliyeen wiil dhalinyaro muslim ah oo horay weerar ugu dhaawacay koox fanaaniin reergalbeed ah kuwaas oo fisqi ka waday dhulka Xarameynka.
Fatahaado 24 qof ku dhinteen oo ku dhuftay dalka Koongo.
0 Saturday April 18, 2020 - 11:56:44
Ugu yaraan 24 qof ayaa dhimatay tobanaan kalane waxyeello ayaa soo gaartay kadib markii roobab dabeyllo iyo duufaanno wata ay ku dhufteen wadanka Koongada dimuquraadiga ah ee dhaca bartamaha qaaradda Afrika.
inkabadan 31,000 qof American ah oo Carona ugu dhintay dalka Mareykanka.
0 Thursday April 16, 2020 - 20:06:01
Dadkii ugu badanaa ayaa maalin qura gudaha Mareykanka ugu geeriyooday cudurka Carona Virus, wararka ka imaanaya Mareykanka ayaa sheegaya in shalay oo kaliya ay Carona udhinteen 5,000 oo ruux sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins.
Ciidamada Ammaanka Sacuudiga oo si arxan darra ah udilay Sheekh caan ah.
0 Thursday April 16, 2020 - 12:33:41
Weerar ay ciidamada dowladda Sacuudiga ka fuliyeen gobolka Tabuuk ee dhulka Xarameynka ayaa ku dileen Sheekh caan ku ahaa in uu dhaleeceeyo nidaamka faasidka ah ee uu madaxda ka yahay Max'med Bin Salmaan.
Sheekh Abuubakar Shekaawa oo soo diray Farriin uu ku beeninayo in ladilay.
0 Wednesday April 15, 2020 - 20:30:37
Hoggaamiyaha Jamaacada Ahlusuna Lidacwati Waljihaad ee loo yaqaan Boko Haram ayaa jeediyay kalimad cusub oo uu uga hadlayo dagaalka ay xoogaga jamaacadiisa uga jiraan wadamo dhowr ah oo ku hareeraysan wadanka Nigeria.
Sarkaal katirsan Booliska Masar oo lagu dilay weerar ka dhacay Al Qaahira.
0 Wednesday April 15, 2020 - 20:17:24
Wararka ka imaanaya wadanka Masar ayaa sheegaya in iska hor'imaad xooggan oo ka dhacay magaalada Alqaahira ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ruux oo uu jiro sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada booliska xukuumadda Alsiisi.
0 Monday April 13, 2020 - 19:34:07
Dagaallo culus ayaa markale dib uga qarxay wadanka Liibiya ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika.
22 kun oo qof American ah oo Carona Virus udhintay.
0 Monday April 13, 2020 - 11:46:33
Xanuunka saf mareenka Covid19 ayaa wali dalka Mareykanka kasii wada gummaadka uu ugeysanayo dadka Americanka ah.
« Prev1234567 ... 41Next »